Paxful, Inc. na Paxful USA, Inc. (n'otu na n'igwe, "ụlọọrụ"), etinyere n'okpuru iwu nke Steeti nke Delaware na-enye ọrụ site na ntaneetị nwere ike ịntaneetị na ndị ọgbọ na ọgbọ ("P2P") maka ụlọahịa ịzụta na ire nke ihe onwunwe dijitalụ.
E debanyere aha Ụlọọrụ ahụ dịka Ọrụ Azụmahịa na ngalaba nchekwaakụ steeti Amerịka na-ahụ maka Idowe Iwu Ikpochapụ Wuruwuru Ego ("FinCEN"). Ebumnuche Ibuagha megide Mbufe ego Paxful ("AML") bụ iji gbochie mmebi iwu na-arụ ọrụ adịgboroja, kpuchido ndị ọrụ, azụmaahịa, na ego dijitalụ na ndị ọrụ ego site na ndị omempụ na-erigbu ha. Akwadoro ụlọọrụ ahu na ihe Iwu Nzuzo Ụlọakụ chọrọ na iwu na nduzi metụtara FinCEN.
Dịka akụkụ nke Atumatu Nnabata iwu nke Paxful, Mara atumatu na usoro Ndị ahịa Gị (“KYC”) maka ndị ahịa n’otu n’otu na ndị ụlọọrụ ka emebere iji nyere Ụlọọrụ ahụ aka ịmalite nkwenye ezi uche dị na ya mara ezigbo njirimara nke ndị ahịa ya maka nnyocha ahụ. Iwu a metụtara ndị ọrụ niile nọ na platfọm ma ndị ọrụ ụlọọrụ niile, ndị ndụmọdụ, ndị isi ọrụ, ndị nwe ya na ndị isi ya na-esochi ya.
Iji usoro ihe egwu dị ka akụkụ nke KYC & AML Kwadoro, Paxful agbasorola usoro ndị a:
Nhọpụta nke Onyeisi Nkwenye nwere ọkwa na nnwere onwe zuru oke, nwere ọrụ maka nlekọta nke nrube isi na iwu dị mkpa, ụkpụrụ, iwu na ntuziaka ụlọọrụ;
Mmepụta na ijigide egwu dabere na KYC, Ahịa Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ (CDD), na Iwu Ebugoro Na-arụsi Ọrụ Ike (EDD);
Mmepụta usoro ọnụọgụ maka nkwenye nke ndị ọrụ Ụlọọrụ ahụ (rụtụ aka nankeBlog post a);
Mmekọ gị na arịọrọ ndị mmanye iwu na iwu nchịkwa obodo;
Idekọ Akụkọ Ọrụ Mkpesaga A na-enyoenyo (“SARs”);
Ọzụzụ nke Ụlọọrụ BSA / AML / OFAC;
Ijiri usoro dị iche iche na mgbochi wayo;
Iwu na-aga n'ihu na-enyocha nlekota azụmahịa;
Nnyocha site n'iji nchịkọta blockchain;
Anyị na-etinye SARs ma ọbụrụ na anyị mara, na-enyoenyo maọbụ nwee ihe mere anyị ga-eji na-enyoenyo ihe mere na platfọm anyị. Azụmahịa a na-enyoenyo na-abụkarị ihe na-ekwekọghị na azụmahịa nke onyeọrụ maara nke ọma na nke ziri ezi, ọrụ onwe onye maọbụ nke aka ya. Onyeisi anyị na-ahụ maka nnabata na-enyocha ma nyochaa ọrụ a na-enyoenyo iji chọpụta ma anakọtara ozi zuru oke iji kwado ịdebanye aha SAR. Onyeisi Nkwenye anyị na-ahụ maka nnabata na-echekwa ndekọ na akwụkwọ nkwado nke SARs niile edegoro.
Ụlọọrụ ahụ nabatakwara usoro iwu na usoro nke OFAC na-aga n'ihu iji chebe platfọm ka aghara iji ya rụọ ọrụ iwu machibidoro, site n'aka ndị a machibidoro iwu maọbụ maka nzube nke izere, na-ezere maọbụ na-agabiga iwu nke U.S. na iwu ụwa.
Paxful na-akwado ihe niile OFAC, Ndị Mba Ndị Ahụrụ Pụrụ Iche (SDN) na Ndị egbochiri akwụkwọ mmachi. Biko rụtụ aka na ihe ndị a njikọ maka Ndepụta Ụlọọrụ nke mba ndị amachibidoro ihe egwu na-egbochi iji platfọm Paxful ruọ ọrụ.
Ebe Paxful nyegoro gi ntughari nke usoro iwu a n'asụsụ bekee, ikweziri na enyere ntughari a bụ ka o diri gi mfe ma na ntụgharị asusu bekee nke iwu a ga-enye aka chịkwaa mmekọrịta gi na Paxful. Ọ bụrụ na nghọtahie dị n’etiti ihe usoro iwu asụsụ Bekee na-ekwu na nke ntụgharị okwu na-ekwu, mgbe ahụ asụsụ Bekee ga-anọchi ya.